WOWOW Igumbi lokuhlambela eliziko leFaucet yeChrome-IiFaucethi zaseKitchen eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Iziko lokuqubha leepompo zangasese / I-WOWOW Igumbi lokuhlambela iZiko leMibhobho yokuhambisa i-Chrome
Inkcazo yeMeta: Itafu lokuhlamba igumbi lokuhlambela nayiphi na igumbi lokuhlambela elihonjisiweyo. Umgangatho ophezulu we-4 intshi itafile yokuhlambela ngesantya esiphezulu somgangatho. Thenga itawuli lokuhlambela lechrome ngoku!
2321200C imiyalelo yokufaka
Isikhuhlisi segumbi lokuhlambela leCouch 2321200C
Nangona kukho imibala emininzi kunye nokugqitywa ngokubhekisele kwiifenitshala zokuhlamba, i-chrome ecwebezelayo isesona sithuba sogumbi lokuhlambela esidumileyo. Kutheni kunjalo? Esona sizathu kukuba i-chrome icwebezela kwaye inika nayiphi na igumbi lokuhlambela ukubukeka okukhazimlayo. Xa uzibona kwigumbi lokuhlambela le-chrome, kukunika umbono wokuba umsukeli kunye negumbi lokuhlambela licocekile njengempempe. Oku kubalwa kwiFlethi yeGumbi lokuhlambela le-WOWOW ngokunjalo. Ngenxa yokubekwa kwayo, ifaka imbonakalo yeklasikhi kunye nenesitayile. Hayi kwindawo yokugqibela ngenxa yombala we-chrome kunye noyilo lwesibindi lwezibambo ezimbini zomphathi.
Isikhuselo secandelo lokuhlambela le-Chrome
Ngaphandle kombala, igumbi lokuhlambela liza ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kunye noyilo. Iintlobo ezintathu eziphambili zegumbi lokuhlambela igumbi lokucoca igumbi lokuhlambela zezi:
Iefestile zekhaya lokuhlambela
Iifestile zokuhlambela ezibanzi
Iifestile zokuhlambela ezizodwa
Zombini izincedisi zephawuni kunye neefiyulethi ezinwenweleyo zibhalwe njengezicoci zokuphatha igumbi lokuhlambela ezimbini. Umahluko phakathi kwezitayile zokuhlambela zegumbi lokuhlambela kunye neefenitshala ezisasaza kwigumbi lokuhlambela ayisiyonto enkulu. Zombini izitya zokuhlambela zifuna imingxunya emithathu ukuze ifakwe ngokuchanekileyo kwindawo yakho yokuhlambela. Into kuphela kukuba izibambo zomphathi wegumbi lokuhlambela elinabileyo zinokufakelwa ngokulula kumgama ozi-4 ukuya kwi-16 intshi ukusuka kwisikhenkcezi ngokwaso. Ngeziko lokuhlambela elinendawo yokuhlala, izibambo sele zibekwe ngokudibeneyo kwii-intshi ezi-4 ukusuka kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela. Izibambo ekugqibeleni zenza inxenye yecandelo lokuhlambela igumbi lokuhlambela. Ukufakela itephu yokuhlambela yeziko eliphakathi kulula kakhulu, njengoko ungazukufumana naziphi na iipompo zamanzi ezivulekileyo njengoko kunjalo kwizindlu zokuhlambela ezibanzi.
Yila isitayile sokuhlambela segumbi lokuhlambela
Isikhenkcisi sokuhlambela segumbi lokuhlambela le-WOWOW sinikezela igumbi lokuhlambela uliyilo olunobuncinci kodwa uludwebe. I-faupet yegumbi lokuhlambela le-Wowow ephantsi ye-arc ke ngoko lelona lokongeza lihle kwigumbi lokuhlambela. Ukugqitywa kwekrisikhi kubonakalisa igumbi lakho lokuhlambela njengesipili-esibonakalayo. Ngokufanelekileyo udibanisa le faucet yegumbi lokuhlambela le-chrome kunye neefesitile zokuhlambela kwigumbi elinye. Ungafumana i-faisalts ye-chrome yokuhlambela yeWWOW yeseshini yakho yokuhlambela kunye nebhafu yokuhlambela ukuze ufikelele kubunye obunobunye kwigumbi lakho lokuhlambela.
Ngaphandle kwamathandabuzo, elona candelo lahlukileyo le-faucet yendawo yokuhlambela ye chrome zizinto ezimbini ezibambekayo. Banikezela uyilo olwahlukileyo oluya kubonelela igumbi lakho lokuhlambela nge-wow-factor. Ayisiyiyo kuphela ezi zibamba ngesandla. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Le faucet yegumbi lokuhlambela le-chrome ibandakanya uyilo oluzixhobo ezi-2 ezihambelana nomgaqo-nkqubo we-ADA. Oko kwenza ukuba le faucet yegumbi lokuhlambela le-chrome lihlale liqinile kwaye lisebenziseka lula.
Isikhenkcisi esisebenzayo se-chrome yokuhlambela
Izixhobo zeflethi yegumbi lokuhlambela lechrome kulula ukuyisebenzisa. Nokuba isantya sokuhamba kwe-GPM eyi-1.2 sikunceda ukuba ugcine amanzi ukuze wonge imali. Oku kwenza ukuba le faucet yegumbi lokuhlambela le-chrome igunyaziswe ukusetyenziswa okuzinzileyo nokuzinzileyo. Ngaphandle koko, isitofu sokuhlambela se-chrome sihambelana namanzi kunye neendawo zeminwe, ngoko ke kulula kakhulu ukucoca isitofu sokuhlambela se-WOWOW se-chrome. Uya kuba nakho ukugcina igumbi lakho lokuhlambela elihonjisiweyo lihlala licocekile ngalo lonke ixesha!
Umgangatho ophezulu wokuhlambela ikhephu lokuhlambela
I-Wowow ngumenzi onobuchule womatshini wokuhlamba igumbi lokuhlambela. Sisebenzisa uyilo olunesibindi ngokudibana netekhnoloji yokuvelisa yanamhlanje. I-Wowow imele imveliso ekumgangatho ophezulu kunye nolawulo olubanzi lomgangatho. Ngale ndlela i-WOWOW ihlala ikwazi ukuvelisa iincinci zokuhlamba ngokuhambelana nemigangatho esemgangathweni yecandelo. Isikhenkcisi sokuhlambela se-chrome se-WOWOW senziwa ngoomatshini bezinto eziphezulu kunye neewash lathes. Ke ngoko sinokufikelela kubuncinci obuchanekileyo belo faucet yegumbi lokuhlambela lokuqinisekisa ukusebenza kakuhle. Isikhenkcisi sokuhlambela se-chrome senziwe ngentsimbi engenasici ukuze sikwazi ukumelana ne-corrosion kakhulu. Itafile yegumbi lokuhlambela le-WOWOW ifakwe kwi-chromium kwaye iinxalenye zangaphakathi zilukhuni ukuqinisekisa amanzi acocekileyo ngaphandle kwayo nayiphi na intsalela yokhuseleko olufanelekileyo kuwe.
Ukufakelwa ngokulula ukufaka ifenitshala yegumbi lokuhlambela le-chrome
Isikhuselo segumbi lokuhlambela le-chrome lenzelwe igunjana lokuhlambela elinemingxunya emithathu echazwe ngaphambili eyi-4 intshi ngaphandle komnye. Isikhuselo sakho segumbi lokuhlambela elinomphezulu ofanelekileyo liya kulunga ngaphandle komthungo kwigumbi lokuhlambela lakho lokucoca. Izinto ezimbini kuphela onokuthi uzenze ngokukhawuleza ukufaka itafile yokuhlambela ye-chrome ngokungqongqo kwigumbi lokuhlambela ngamabini afakiweyo eplastiki e-swivel. Ekugqibeleni, uqhagamshela iipompo zamanzi kukudibanisa namanzi abandayo axhuma.
Le faucet yegumbi lokuhlambela le-chrome yeWOWOW iza ne-pop ehambelana nokuhombisa okuphezulu. Ungayifaka ngokulula ipop ye-drain ukuze ukwazi ukuyilawula nge-faucet yakho yokuhlambela entsha ye-chrome. Zonke izinto eziyimfuneko ziyahanjiswa kunye nemveliso. Ngokhokelo lokufaka ungafakela ngokulula le faucet yegumbi lokuhlambela elinombhobho wokufukula ngokwayo phantsi kwesikhokelo samanyathelo okulandela ngokulula encwadi.
Njengoko i-WOWOW imele umgangatho weemveliso zayo, asoyiki ukukunika iwaranti yeminyaka emi-5 kweli faucet yegumbi lokuhlambela eliphakamileyo. Siyazi ukuba sinikezela ngemveliso ekumgangatho ophezulu ngexabiso elikhuphisana kakhulu. Ke ngoko siyazi ukuba sinikezela ngeyona ndlela ingumgangatho wexabiso. Ukuba igumbi lethu lokuhlambela lechrome linokungayenzi into obungayilindela ukuba yenziwe kwigumbi lakho lokuhlambela, ungasibuyisela isuntswana lokuhlambela kwaye siya kuyibuyisela endaweni entsha. Ilula njengaleyo!
Ngaphandle koko sinikezela ngesiqinisekiso sokubuyiswa kwemali kwiintsuku ezingama-90. Xa ufuna i-faucet yegumbi lethu lokuhlambela kwaye inokungasebenzi ngendlela ofuna ngayo ukuba isheyile yakho yokuhlamba isebenze, ungayibuyisela kuthi ngaphandle kwemibuzo ebuzwayo. Siza kuyibuyisela imali yakho ngaphandle kwengxaki. Njengoko sikholelwa kwimveliso yethu, kwaye sinamakhasimende amaninzi anelisekileyo kwihlabathi liphela, Siyazi ukuba uya kumangaliswa ngokuqinisekileyo nge-faefet yegumbi lokuhlambela le-WOWOW. Uqinisekisiwe!
Izibonelelo zesikhenkcisi sokuhlambela se-chrome ngendlela engezantsi:
 Uyilo lwekrisimakhi ebengezelayo
 Ubukhaphukhaphu obunjengokukhanya okubonakalayo
 Ukudibanisa ngokulula kunye nezinye iifestile zeshawari yokukhanya
 Yenziwe ngensimbi engenasiseko
I-SKU: 2321200C iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Iziko lokuqubha leepompo zangasese tags: iarc ephantsi, Ichrome etyheliweyo
9.17 x 9.09 x 3.98 intshi
Zinc ingxubevange / Brass / Stainless intsimbi
3 umngxuma 4 intshi amaziko uyilo lokuhlambela lokuxhuba itephu
Amanzi ashushu kunye namanzi abandayo alawula ngokwahlukeneyo
I-NSF yodongwe ivalve yediski, xuba amanzi, imingxuma emi-3 kuyilo lweziko, kulula ukuyifaka, 4 ukuphatha ukuphatha amanzi ashushu nabandayo, i-chrome
Faucet * 1, Ufakelo iinkcukacha * 1, Drain Assembly * 1